Tun Tun's Photo Diary: April 2016
Visit to Mackhayar Taik & Eating Mandalay Foods
2013-Jun-22, မန္တလေးမြို. ၆၂လမ်း နဲ. လမ်း ၃၀ ထောင့်မှာ တည်ရှိတဲ့ မက္ခရာ တိုက် ကို ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ခဲ့တယ်။ သူများပြောတာကတော့ အရိုးပြိုင်းပြိုင်းထနေတဲ့ ဘုရား ရုပ်ထုထဲမှာ ဒီဘုရားက ကမ္ဘာမှာ အကြီးဆုံးလို.သိရပါတယ်။ တကယ်ကြီးလို.လဲ အဝေးကနေ ကိုလှမ်းမြင်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ၀င်ဖူးဖြစ်တာပါ။ ကျွန်တော် အခုတစ်ခါ ရောက်တုန်းက ကျောင်းဝန်းထဲမှာ တခြား ဆင်းတုတော်တွေကို ဆောက်တုန်းရှိသေးတယ်။ ၂၀၁၅ တုန်းကလဲ တခါရောက်ဖြစ်တယ်၊ အဲ့ဒီခါကြတော့မှ ကျောင်းဝန်းထဲမှာ ဘုရားရုပ်ထုတွေ အပြည့်နဲ. တွေ.ရတယ်။
at 4/26/2016 10:14:00 PM Links to this post No comments:
Labels: Mandalay, Myanmar, Myanmar Food
2014 ခုနှစ်ထဲမှာ ရိုက်ဖြစ်တဲ့ အရုပ်ပုံလေးတွေ စုပြီး တင်လိုက်ပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ ဒီလိုအရုပ်ဆိုင်လေးတွေ shopping mall တွေမှာ တွေ.ရတက်ပါတယ်။ အရုပ်လေးတွေ က အရမ်းလက်ရာမြောက်ပြီး ချစ်စရာကောင်းပါတယ်။ ဈေးကလည်း က နည်းဘူးလေ။ ကျွန်တော်ကတော့ မ၀ယ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လမ်းကြုံ၇င် သွားကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဒီပုံတွေကတော့ ဆိုင်ရှင် အလစ် ခိုးရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေပေါ့။ ဆိုင်ရှင်သိရင် တော့ ဓါတ်ပုံ ပေးရိုက်မယ် မထင်ဘူး။
at 4/20/2016 10:34:00 PM Links to this post No comments:
Garden By The Bay, Sunrise
2013-Oct-26, Garden by the bay ကို ညပိုင်းမီးထွန်းတဲ့အချိန်မှာ ဓါတ်ပုံ ခဏခဏ သွားရိုက်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မနက်ပိုင်း နေထွက်တာ ဘယ်လိုနေလဲ သိချင်လို. မနက်စောစောထပြီး သွားရိုက်ခဲ့ပါတယ်။
at 4/11/2016 10:50:00 PM Links to this post 1 comment:
Labels: Landscape, Singapore, Sunrise
2013-Aug-08, စင်ကာပူက တိုက်လှလှလေးတွေ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို. Keppel Bay ဘက်ကို သွားခဲ့တယ်။ Sentosa တို. Vivo City တို. ခဏခဏ ရောက်ပေမယ့် ဒီဘက်ကို တခါမှ မရောက်ဖြစ်ဘူး။ ဒီကနေ.မှပဲ ဒီဘက်ကို သီးသန်.လာလည်ခဲ့တယ်။
at 4/03/2016 12:30:00 AM Links to this post No comments: